Mutungamiri Mutsva weZambia, Hichilema, anoda Tourism: African Tourism Board yakagadzirira kuita
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » African Tourism Bhodhi » Mutungamiri Mutsva weZambia, Hichilema, anoda Tourism: African Tourism Board yakagadzirira kuita
African Tourism Bhodhi • Nhau Nhau • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • tsika nemagariro • Hurumende Nhau • nhau • vanhu • Dhinda Zviziviso • ushanyi • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Akasiyana Nhau • Zambia Breaking News
Mutungamiri weZambia, VaHichilema
Kana Nyika ne Africa zvotaura nezveZambia vanotaura nezve Tourism ne Mhangura.
Nhasi Hakainde Hichilema akasimbiswa kuve Mutungamiriri weZambia - uye neiyi Tourism Zambia inokunda.
African Tourism Board yakaona izvi uye yakakurumidza kubvuma.
3 mazuva apfuura eTurboNews akafanotaura Hakainde Hichilema kuve mutungamiri mutsva weZambia. Izvi zvino zvasimbiswa zviri pamutemo.
Sarudzo komisheni yakapa Hichilema 2,810,777 cotes achipikisana nemuvengi wake Lungu uyo ​​akagashira 1,814,201- nenzvimbo dzese asi imwe chete yemazana gumi nematanhatu akaverengwa. Naizvozvo sachigaro wekomisheni Esau Chuly akabata Hichilema kuve Mutungamiriri mutsva weRepublic of Zambia
Mumwe wevatungamiriri vekutanga vekunze kukorokotedza Mutungamiri Hichilema aive Sachigaro weAfrican Tourism Board Cuthbert Ncube. Iye anoziva kuti kutarisisa kunorevei kune achangobva kusarudzwa Mutungamiri Hichilema
Iye achangobva kusarudzwa Mutungamiri weZambia zvakare murume wekushanya. Gore rakapfuura akataura paFacebook yake nezveZambia yakawanda yekushanya kunosanganisira Victoria Falls, Lumangwe, uye mamwe mapopoma akaisvonaka muNorth Circut, asingakanganwe Ntumbachushi, Kamabo neKudalila.
Akaenderera mberi achitaura nezvekufamba kukuru kwemhuka munyika kunogona kuwanikwa muZambia. Prehistoric rock art nemapako emapako munzvimbo zhinji dzematunhu edu ane mukurumbira Nachikufu kuMuchinga.
Sango reChirundu Fossil rinotangira pamamiriyoni zana nemakumi mashanu emakore apfuura, ndimo munobva Zambezi muMwinlunga, mazana manomwe emarudzi eshiri, nedzimwe mhando dzesango dzisingaverengeke.
Mutungamiri mutsva akati runyorwa rwezvivakwa zvevashanyi haruperi. Anotsanangura kuti Zambia inokwezva vashanyi zviuru mazana mapfumbamwe pagore kuVictoria Falls chete.
Vati isu hatina kuisa kushanya kumusoro kwebhureki, asi isu tinofanirwa kuzviita izvozvi. Paakataura izvi, zvaive zvisati zvaitika COVID. Zano rake raive rekuwedzera vashanyi kusvika pamamirioni maviri nezviuru zvishoma nemari inosvika $ 2.5 bhiriyoni. Kana nyika ino yawana COVID-1.9 kumashure kwemutungamiri mutsva uyu anogona kuenderera mberi nechirongwa ichi semutungamiri weZambia.
Kunzwa izvi, hazvishamise kuti mumwe wekutanga kukwazisa mutungamiri akasarudzwa ndiCuthbert Ncube, Sachigaro we African Tourism Bhodhi (ATB)
African Tourism Board inokorokotedza Anokudzwa Mutungamiri Hakainde S Hichilema nekusarudzwa semutungamiriri wechi7 weRepublic of Zambia.
Isu tinokoshesa nekukudza hukama hwedu hwepedyo neichi chishongo cheAfrica mukati meiyo Tourism hurongwa.
Zambia ndiyo inogadzira mhangura hombe pasi rose uye chimwe cheZvishamiso zveNyika chinokwezva vashanyi muZambia, The Mosi-wa-Tunya.
Cuthbert Ncube, Sachigaro weATB
The African Tourism Bhodhi (ATB) ichatsigira nekusimbisa hukama nenyika hombe iyi apo patinenge tichiumba nekudzokorora Nyika yeAfrica senzvimbo inodiwa yekusarudza kuAfrica nepasi rose.
Victoria Falls igumbeze repasi rose remvura inodonha uye yakakosha pasirese kune ayo akasarudzika geological uye geomorphological maficha ane anoyevedza maonero uye anoshanda ivhu kugadzirwa kusanganiswa neakatanhamara runako runonzi rweMapopoma, kumwaya mhute, uye muraraungu.
Makorokoto Mutungamiri wangu. Itariro yangu kuti kana iwe wapika mukati, iwe uchatungamira kupatsanura kwemasimba. Kupfuura chero chinhu, Zambia inoda kuenderera mberi kwemutemo kupfuura hurumende uye chete mutongi akazvimirira anogona kuvimbisa izvozvo. Iyi yaive imwe yemameseji mazhinji akatumirwa kumasocial media senge Twitter. Iyi meseji yakatumirwa naZikomo Kwambili.
Mumwe meseji yakatumirwa inoti:
Makorokoto Mutungamiri Hichilema uye kuvanhu veZambia vakavhota kupfuura miganho yemadzinza inoratidza Zambia ichiri RUDZI RUMWE
Izvi zvaizoita kechitatu kuti masimba achinje zvine runyararo kubva kubato rinotonga kuenda kunopikisa kubva nyika yekumaodzanyemba kweAfrica yawana kuzvitonga kubva kuBritain muna 1964.
Kudunhu rose reZambia, mhemberero dzakatanga mumigwagwa apo vatsigiri vaHichilema vakapfeka tsvuku neyero yeUnited Party for National Development (UPND) vachitamba nekuimba, ukuwo vatyairi vachiridza huta.
Hichilema, 59, aimbova CEO pakambani yeakaunzi asati apinda mune zvematongerwo enyika, ave pamberi pebasa rekuedza kumutsiridza hupfumi hweZambia. Hupfumi hwacho hwakakwenenzverwa zvishoma chete nemitengo yemhangura yakanakisa - iko zvino ichifamba pamusoro pemakore gumi, ichitungamirwa pamwe chete nemota dzemagetsi.
Mwaka wadarika, Zambia, mugari wechipiri muhombe wemhangura muAfrica, yakaburitsa chinyorwa.
Lungu, makumi matanhatu nemana, haasati abvuma. Akaratidza kuti anogona kupokana mhedzisiro, inozove yakaoma, kupihwa kumahombekombe.